Emerald Cover- Soft, Lightweight and Cozy HF29028-1 bedspread, China Emerald Cover- Soft, Lightweight and Cozy HF29028-1 bedspread Manufacturers, Suppliers, Factory - Zhejiang Rancho Santa Fe home textile Co., Ltd
N 'AJIDJID AJ APR W
Niile oge ezumike BEDSPREAD
Ejiri nke dị nro, nke dị 100% microfiber nwere oke owu ma dị oke mkpa, akwa ụra a dị mfe iji jiri ihu igwe na-ekpo ọkụ kamakwa ọ na-anagide nke ya n'abalị oyi. Enwere ike ịsacha igwe n'ime mmiri oyi. Daa daa na obere okpomọkụ. Wuru-adịru nnọọ ogologo ma ọ bụrụ na nọgidere na-enwe n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Unyi na-eguzogide akwa na ntutu anụ ga-arapara na ya. Ihe dị elu dị elu na-eguzogide ọgwụ ma na-agwụ ike.
Ugwu kacha elu na oru ndi ahia. Ngwaahịa anyị nwere ogo ogo dị elu nke 100% afọ ojuju ndị ahịa. Ihe nfe dị mfe na -emepụta ọmarịcha akwa akwa dị mfe ma na-enweghị nsogbu iji lekọta nkasi obi na ịdị mma nke ụlọ.